Semalt: Fitaterana Spam ny Google Analytics sy ny fomba hanakanana izany
Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, mieritreritra fa tsy mety ny miteny fa ny spam Analytics dia iray amin'ireo olana goavana amin'ny webmaster amin'izao andro izao. Lasa nalaza io lohahevitra io, ary maro ny fomba hiatrehana io olana io. Google dia namorona sehatra fanohanana momba ny fifamoivoizana ao amin'ny pejiny, izay natao hanomezana antsika ny vaovao ilaina mba hahafahantsika mahazo vahaolana amin'ny olantsika. Ny solontenan'ny Google Analytics Adam Singer dia nanamafy fa ny orinasa dia miezaka mamaha ilay olana. Na dia izany aza dia haka fotoana kely izy, ary tsy fantatra ny daty marina. Tamin'ny voalohany dia nandalina tantara maherin'ny 259 kaonty Google Analytics izy ireo, izay tsy nisy viriosy sy spam. Nametraka ny sivana izy ireo ary nanana mpitsidika 24 isam-bolana farafahakeliny. Ny fifamoivoizana momba ny spam iray manontolo dia mihoatra ny folo isan-jato, ary manodidina ny dimampolo isan-jaton'ireo tranokala no nahitàna fifamoivoizana avy amin'ny tambabe maherin'ny dimanjato. Tokony handinika an'ireny fitaovana ireny ianao izay hanampy anao hitazona ny data sy ny antontan'isa Google Analytics ho anao ary tsy misy spam.
Izany dia fanakanana spam avoavo izay manavao azy matetika. Amin'ny vanim-potoana, mizara maimaimpoana maherin'ny 550 ao anaty lisitra izy io ary ahitana URL mampiahiahy ary manivana ireo rohy ireo mba hanomezana anao ny vokatra tsara indrindra sy mety indrindra. Ny fitaovana dia maimaimpoana maimaim-poana, manana fifandraisana tsotra sy mpampiasa miaraka amin'ny safidy maro..Azonao atao koa ny manavao ny kaonty maro, ary mora foana ny mijery azy. Ny farafaharatsiny dia mihoatra mihoatra ny iray alina fangatahana isan-andro, fa tokony hampandrenesinao ny sivanao isaky ny mampiditra sehatra vaovao amin'ity fitaovana ity ianao.
Mamelà ahy hanazava fa ny Tooltalk Analytics dia tsy misy vidiny; Tsy maintsy mandoa 15 dolara isam-bolana ianao mba hahazoana ny endri-javatra rehetra, fa ny vidiny dia ambany noho ny headache ity fitaovana ity afaka manamaivana. Io dia iray amin'ireo fitaovana mahagaga sy mahatalanjona indrindra rehefa manitatra ny tatitra ataonao amin'ny Google Analytics ary manome anao ny valiny marina indrindra. Ity fitaovana ity dia manavao ny sivana ho azy, noho izany dia tsy mila manao asa manokana ianao rehefa mampiditra domains vaovao. Azonao atao ny mampihatra ireo sivana amin'ny karazana endri-javatra, sy fomba fijery, ary kaonty. Ny fitaovana dia manana interface sy mora mora takarina. Ny ampahany tsara indrindra dia tsy misy fetrany ny habaka, izay midika fa afaka manampy tranainy sy faritra maro araka izay tratra ianao. Na izany aza dia tsy maintsy misoratra anarana ianao ary mahazo fankatoavana, ary koa mandoa saram-pandraharahana mba hahazoana ity fitaovana ity sy ireo karazany samihafa.
Fananganana Spam Filaharana
Loharanon-kevitra mivelatra sy rindrambaiko maimaim-poana ny solosaina finday. Io no iray amin'ireo fitaovana fanontam-pirinty manerantany indrindra amin'ny Internet. Mora ny mandefa sy manana karazan-javatra maro. Izany dia azo ampiharina amin'ny tranokalanao ary manana fomba fijery sy toetra samihafa hisafidianana. Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny sehatra tokana amin'ny fotoana iray ary misy fetran-tsisintany miisa roa arivo isan'andro. Ary koa, ny isan'ireo sivana sy sehatr'asa dia tsy azo ampitaina marina tsara, ary tsy fahampian'ny fiantraikan'ity fitaovana ity izany Source .